Indlela yomtshato owonwabisayo ngokwebhayibhile Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Indlela yomtshato owonwabisayo ngokweBhayibhile
Indlela yomtshato owonwabisayo ngokweBhayibhile. KumKristu, umtshato ayisiyondlela nje yolawulo abanxibelelana ngayo abantu ababini. Imalunga nenye into. Ikholwa liya kuhlala liyibona i umtshato njengomanyano phakathi kwabantu ababini abathandanayo phambi koThixo. Ke ngoko, ekuphela kwendlela yokuba nonwabe emtshatweni xa uKristu ekho.
Ukuze sazi oko uThixo akufunayo emtshatweni wethu, kufuneka sigxile ibhayibhile, kuba ayichazi ukuba abantu mabenze ntoni ukuze bonwabe emtshatweni.
1 Ungayifumana njani inyathelo lomtshato elonwabisayo ngenyathelo
1.1 1. UYesu uliziko lomtshato
1.2 2. Thembeka kwiqabane lakho
1.3 3. Bonisa intlonipho
1.4 4. Beka izilangazelelo zeqabane lakho ngaphambi kwezakho
1.5 5. Funda ukuxolela ucele uxolo
1.6 6. Nxibelelana kakuhle
1.7 7. Yiba nomonde
1.8 8. Misela umzekelo
Ungayifumana njani inyathelo lomtshato elonwabisayo ngenyathelo
1. UYesu uliziko lomtshato
U-Yesu uhlala esesizikithini se- umtshato. Ukufezekisa oku, kubalulekile funda ibhayibhile nithandaze kunyeUkufuna ukuthanda kukaThixo phakathi kwenu nobabini kuyomeleza umtshato wenu kwaye kunceda ukuba ujonge kweyona nto ibaluleke kakhulu.
2. Thembeka kwiqabane lakho
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu emtshatweni yile hlala unyanisekile kwiqabane lakho. Ibhayibhile izele zizilumkiso malunga nengozi yokungathembeki emtshatweni, kuba a umtshato othembekileyo uzisa ulonwabo nentsikelelo ngakumbi kunomtshato ogcwele ubuxoki nokungcatsha.
3. Bonisa intlonipho
Kuya kufuneka uyikhumbule loo nto iqabane lakho ngumntu okhethekileyo owenziwe ngokomfanekiso kaThixo. Ke ngoko ukuba u Udelela uThixo.
4. Beka izilangazelelo zeqabane lakho ngaphambi kwezakho
Ihlabathi Isifundisa ukuba sizijonge ngokwethu ngokubeka iminqweno yethu ngaphambi kwabanye. Nangona kunjalo, iBhayibhile isifundisa oko kufuneka sibakhathalele abamelwane bethu ngokungathi besingabo.
Ukuba uyazibuza ukuba ungonwaba njani emtshatweni, khumbula ukuba «ngamnye akakhathaleli nje kuphela iimfuno zakhe kodwa kwanezilangazelelo zabanyes "(KwabaseFilipi 2: 4).
5. Funda ukuxolela ucele uxolo
Emtshatweni, nobabini niyakwenza izinto ongazithandiyo iqabane lakho. Ngesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukuba uthobeke kwaye ucele uxolelo, kuba kuyakubakho amaxesha apho usenza iimpazamo kunye nabanye xa iqabane lakho lisenza iimpazamo. Khumbula ukuba akukho mntu ugqibeleleyo.
Xhasanani kwaye nixolelane iziphoso eninazo omnye komnye. Xolela njengokuba iNkosi ikuxolele.
6. Nxibelelana kakuhle
Kubudlelwane njengesibini, umdla, iinjongo kunye namaphupha esi sibini kufuneka saziwe. Ukuphela kwendlela yokulungelelanisa iimfuno zakho kunye nezabo. Ke ngoko, unxibelelwano oluhle lubalulekile emtshatweni.
Ngaba baya kuhamba abantu ababini xa bengavumelani?
(Amosi 3: 3)
7. Yiba nomonde
Kuya kubakho amaxesha xa uza kuba nexesha elinzima. Akukho buhlobo bufezekileyo ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, kuhlala kukho amaqhuma, ubunzima kunye neemeko ezinzima kakhulu. Nangona kunjalo, iBhayibhile isifundisa ukuba, ukuba uyafuna nyani ukonwaba emtshatweni, kufuneka lwela umtshato wakho ngaphandle kokunikezela. Ngale ndlela, qiniseka ukuba uThixo uya kuba nawe.
Ngako oko abasebabini, kodwa banyama-nye. Ke ngoko, oko uThixo akumanyileyo, bahlule.
(Mt 19: 6)
8. Misela umzekelo
Awunakho ukucela nabani na ukuba enze into ongenakukwazi ukuyenza. Ukuba ulithanda ngokwenyani iqabane lakho, sukumlinda ukuba enze inyathelo lokuqala kuba unokulindela okufanayo nakuwe. Ke ngoko, Yiba noxanduva kwaye uhlakulele abanye abantu ukubagcina bekwindlela elungileyo.
Siyathemba ukuba ezi ngcebiso zisibhozo zikuncedile ukuba uqonde indlela yomtshato owonwabisayo ngokwebhayibhile. Indlela ayikho lula, nangona kunjalo, ukuba uyakwazi ukuthobela ezi ngcebiso, uya kubona ukuba izakufaneleka njani.
Kube njalo! Ukuba ngoku ufuna ukwazi zithini iziphumo zesono, qhubeka ukhangela fumanisa kwi-intanethi.
Kungenxa yokuba uYesu wahlamba iinyawo zabafundi bakhe
Kutheni iiTattoo zisisono